Fanamarihana ny fetim-pirenena: hatao amin’ireo renivohi-paritany enina ny matso | NewsMada
Mbola mitoetra ny hamehana ara-pahasalamana ho an’ny 15 andro manaraka na efa nihena aza ny tranga covid-19. Nambaran’ny filoha Rajoelina Andry, niainga avy any Taolagnaro, omaly fa ferana ho isaky ny renivohi-paritany enina ihany ny matso.
Nambarany tamin’izany fa hankalazaina afaka 13 andro ny fetim-pirenena sy ny faha-61 taona niveran’ny Fahaleovantena. “Noho ny hamehana sy hifehezana ny fiparitahan’ny covid-19 anefa, eny anivon’ny renivohi-paritany enina ihany no hankalazana izany sy hanaovana ny matso”, hoy izy. Nentaniny ny rehetra hanangan-tsaina, hampisehoana ny hambom-pirenena. “Hiredareda ny afon’ny fitiavan-tanindrazana handresena ny sedra sy ny ady sarotra rehetra”, hoy izy.
Na izany aza, mbola baraingo na ho etsy amin’ny kianjan’ny Barea Mahamasina ihany ny hanaovana ny matso eto Antananarivo na tsia. Efa nanambara ny mpanolontsain’ny filoha, Andriamanohisoa Gerard fa efa azo hanatanterahana hetsika ny kianja ny 26 jona izao. “Miankina amin’ny fanjakana anefa izany”, hoy izy.
Niakatra ho 200 ireo afaka mivorivory
Etsy andaniny, nambaran’ny filoha fa miverina amin’ny andavanandro ny fiainana amin’ny ankapobeny. “Hampiakarina ho 200 ireo afaka mivorivory raha noferana ho 100 izany teo aloha. Miankina amin’ny toerana fandraisana koa anefa izany ahafahana manaraka sy manaja ny fepetra”, hoy ihany izy. Mbola tazonina hatrany ny tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina, manomboka amin’ny 11 ora alina izany ka hatramin’ny 4 ora maraina.
Ankoatra izany, azo atao ny fandevenana na miditra na mivoaka ny faritra rehetra raha tsy voan’ny covid-19 ilay maty. Nametrahana fepetra anefa izany amin’ny alalan’ny taratasy omen’ny BMH.
Omena alalana manokana ireo mana-manjo
Ho an’ny matin’ny covid-19 kosa, voarara ny mitondra ny razana miditra na mivoaka ny faritra rehetra manerana ny Nosy. Tsy miova koa ny fandevenana fa alevina ny androtr’iny ihany izany ary ferana ho 10 ireo mpandevina. “Mbola voarara ny mamindra razana na mamindra sy mamoaka izany any amin’ny faritra hafa raha efa nalevina”, hoy ihany ny filoha.
Etsy andaniny, mbola mikatona ny sisin-tany. Na izany aza, nambaran’ny filoha fa omena alalana manokana ireo hanefa adidy farany amin’ireo mana-manjo, namoy ray aman-dreny, vady, zanaka, mpiray tampo.
Misokatra ny “espace”, “cabaret”, mariazy
Ela ny ela…Misokatra ny toerana fanaovana lanonana rehetra, araka ny fanambarana nataon’ny filoha hatrany. “Afaka misokatra anaty fepetra, toy ny « cabaret », ny « espace », ny mariazy sy ny sisa… Ao anatin’izany ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana anefa izany ”, hoy izy.
Tsiahivina fa maro ireo mpisehatra amin’ny fanafanana lanonana sy ny karazany no mikaikaika, nandritra ny fepetra ara-pahasalamana. Manomboka mivaha tsikelikely, araka izany, ny fiverenana amin’ny laoniny ny fiainana andavanandron’ny mponina. Nandritra izay iray volana mahery izay, maro ny mpanakanto sy mpisehatra eo amin’ny fanafanana lanonana no naneho ny fihetseham-pony noho ny fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana amin’ny fisorohana ny fihanahan’ny valanaretina coronavirus tsy hiparitaka. Maro ireo mpanakanto tra-pahasahiranana nandritra ny fotoana nanapahan’ny fanjakana hevitra ny amin’ny fanakatonana ny toerana fanaovana lanonana. Manomboka hiverina amin’ny lazoniny izany izao. Maro rahateo ny fifanarahana amina hetsika nataona mpanakanto sy ny mpikarakara lanonana no rava noho ny fepetra noraisin’ny fitondrana hisorohana ny fihanahan’ny covid-19. Nisy mihitsy aza, ireo mpanakanto lavon’ny coronavirus.
Na izany aza anefa, nohamafisin’ny filoha fa mbola mitoetra ny fepetra rehetra manerana ny Nosy, efa nambara tany aloha. Anisan’izany ny tsy mbola fandehanan’ireo marefo miasa, ohatra…
Mila mitandrina amin’izao ririnina izao
Anton’ireo fepetra rehetra ireo sy ny famahana tsikelikely ny ampahan’ny fanapahan-kevitra sasany tany aloha ny filazan’ny filoha fa efa an-dalan’ny fandresena ny valanaretina isika izao noho ny fihenan’ny tranga vaovao. Nisy ny ezaka natao niarovana ny vahoaka ary hotohizana izany rehetra izany. “Mila mitandrina anefa isika satria miditra amin’ny ririnina », hoy izy.
Nifampidinika ny teo anivo’nyn andrimpanjakana telo tonta fa mitohy ny hamehana ara-pahasalamana mandritra ny 15 andro manaraka.
Na ao anatin’ny hamenana aza anefa araka ny nambarany hatrany, tsy maintsy mitohy ny fanarenana ny toekarena sy ny asa fampandrosoana voalazan’ny velirano. Miatrika ady hafa, toy ny kere, haintany, famoizana aina ny firenena ka anisan’ny velirano ny hanavotana azy ireo. « Azo atao ny manarina ny any atsimon’ny Nosy », hoy izy.